Fiatrehana ny fahavaratra - Nodiovin’ny Governora ny lakandrano etsy Besarety sy Andrahavoangy • AoRaha
Fisorohana ny tondra-drano. Avy hatrany dia niroso tamin’ny asa fanadiovana ny lakandrano tsentsina teny Besarety sy Andrahavoangy ny Governoran’ Analamanga Hery Rasoamaromaka sy ireo ekipa mpiara-miasa aminy.
Ho fitsinjovana an’ireo mponina manodidina amin’izao vanim-potoana fiavian’ny orana izao no antony hanatante­rahana ny asa maika tamin’ny alalan’ny fampiasana fitaovana fanadiovana lakandrano teny an-toerana. “Vao orana kely iny no nisy dia efa tondraka sahady ny ambany tanàna. Noho izany dia niasa avy hatrany isika mba tsy ho lasibatra foana ireo mponina ety an-toerana”, hoy ny Governora.
Nandritra ny fandalovany teny an-toerana dia nanararaotra nitatitra ny olana mahazo azy ireo ihany koa ireo mpivarotra teny Andravoahangy. Nisy ny fanamboarana tsena teny an-toerana, saingy voalaza fa maro ireo mpivarotra voailikilika noho ny tsy fananam-bola ka ireo mahitahita ihany no nahazo toerana teo anivon’ity tsena ity. Nilaza ny handray ny andraikitra mikasika an’izany ny Governoran’Analamanga.
Ampahatra Antsirabe :: Lehilahy iray maty nilatsaham-potaka